dayniile » Dunida oo si caro leh uga jawaabtay go’aanka Trump ee Qudus
Magaalada barakeysan ee Qudus
Go’aanki madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu aqoonsaday magaalada Qudus caasimadda rasmiga ah ee Israa’il ayaa diidma xoooggan kala kulantay caalamka.
Hogaamiyeyaasha dunida muslimka iyo guud ahaan beesha caalamka oo dhan ayaa si weyn u dhaleeceeyay tallaabada uu qaaday Trump, waxa ayna ka digeen halista rabshado ka dhasha arrintaan iyo in ay horseedo dhiig daato.
Xoghayaha guud ee hay’adda Qaramada Midoobay Antonio Guterras, ayaa sheegay in aysan jirin wax lagu beddelo xal u raadinta Israa’il iyo Falastiin, waxa uuna ku tilmaamay mowqifka Mareykanku mid laga murugoodo.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, oo booqasho ku jooga dalka Aljeria ayaa isna ku tilmaamay hadalka Trump wax laga xumaado, waxa uuna ku baaqay dadaalo nabadeed iyo in laga fogaado rabshado.
Dalka Turkiga, dibadbaxayaal ayaa isugu tagay banaanka hore ee safaarada Mareykanku ku leeyahay magaalada Istanbuul. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu isna ku tilmaamay go’aanka Mareykanka geyru mas’uulnimo.
Madaxweyne Trump oo u aqoonsaday Qudus caasimadda rasmiga ah ee Israa’il ayaa sidoo kale saxiisay in safaarada Mareykanka laga raro Tel Aviv loona raro magaalada Qudus.
Tallaabadan uu ku dhaqaaqay Trump ayaana waxa ay ka dhigeysa Mareykanka dalkii ugu horreeyay dunida ee si rasmi ah ugu aqoonsado Qudus caasimadda Israa’il.
Arrinta Qudus ayaa xuddun u ah collaada daba-dheeraatay ee u dhexeysa Israa’iil iyo Falastiin, xilli Falastiiniyiinta ay doonayaan in Bariga magaalada Barakeysan ee Qudus ay noqoto caasimaddooda mustqabalka.
Saraakiisha Aqalka Cad waxa ay dhankooda sheegeen in go’aanka Madaxweyne Trump uu yahay “Ictiraaf waaqica haatan jira iyo taariikhdaba” balse ma ahan bayaan siyaasadeed oo rasmi ah, mana beddeli doonto xuduudaha iyo siyaasadda magaalada Qudus.